यो हो दुनियाको सबैभन्दा धेरै चट्याङ पर्ने ठाउँ (फोटो सहित)
प्रकाशित मिति : 9:31 pm, August 18, 2015
पृथ्वीमा सबैभन्दा धेरै चट्याङ पर्ने ठाउँ कहाँ होला, थाहा छ ? सायद छैन होला । विश्वको सबैभन्दा बढि चट्याङ पर्ने ठाउँमा यति धेरै चट्याङ पर्दोरहेछ भन्ने कुरा कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ । हो, भेनेजुयलाको माराकाइबो ताल क्षेत्रमा हरेक मिनेटमा २८ पटक चट्याङ पर्दछ र यो दुनियाको सबैभन्दा बढि चट्याङ पर्ने ठाउँ हो ।
जहाँ काटाटुम्बो नदी माराकाइबो तालमा मिल्दछ, त्यो क्षेत्रमा एक वर्षमा २ सय ६० दिन त आँधीबेहेरी र हावाहुण्डरी नै चल्दछ । तिव्र आँधिबेहेरीका कारण त्यहाँ निरन्तर विजुली चम्किरहेको र चट्याङ परिरहेको हुन्छ ।
डेलीमेलका अनुसार माराकाइबो तालमा रहेक मिनेटमा औषतमा २८ पटक चट्याङ पर्दछ अर्थात् एक वर्षमा १२ लाख पटक चट्याङ पर्छ । त्यहाँ परेको चट्याङ अढाइ सय माइल टाढाबाट समेत देख्न सकिन्छ ।
आखिर त्यो तालमा किन यतिधेरै चट्याङ पर्छ होला ? वैज्ञानिकहरुले यस विषयमा विभिन्न खाले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् । तिव्र गतिको हावाले तालको ओसिलो हावालाई जोडसँग सोहोरेर लग्ने र नजिकैको एन्डियन पहाडमा ठोक्काउने गर्दा यस्तो भएको कतिपयको भनाइ छ । अर्को सिद्धान्त अनुसार ताल क्षेत्रको धापमा कुहेका जिव तथा वनस्पतीबाट निस्किएको मिथेन ग्यासका कारण यस्तो चट्याङ निरन्तर पर्ने गर्छ ।
माराकाइबो ताल पहाडले घेरिएको छ । पहाडहरुले क्यारेबियन सागरबाट आउने न्यायो व्यापारिक वायुलाई ट्रयाप गर्दछन् । त्यो न्यानो हावा एन्डिज पर्वतबाट झर्ने चिसो हावासँग ठोक्किन्छ । त्यसपछि दुवै हावा माथि उठ्छन् र गर्जन सहित निरन्तर विजुली चम्किन्छ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार माराकाइबो तालमाथिको आकाशमा चम्किरहने विजुलीका कारण उत्पन्न भएको उर्जाबाट पूरै ल्याटिन अमेरिकामा विजुली बाल्न पुग्दछ ।
हेरौँ माराकाइबो तालमा पर्ने चट्याङका दृश्यहरु